प्रायजसो, बहुमूल्य वस्तुहरू सुरक्षित राख्ने वा पैसा नागरिकहरु आफ्नो घर मा उचित उपकरण छैन। पनि एक घर सुरक्षित साथ, कुनै एक समस्या सुरक्षित हुन सक्छ। सुरक्षित र थप विश्वसनीय प्रयोग गर्न बैंकिंग कक्षहरू। Sberbank सबैका लागि व्यक्तिगत सुरक्षित पट्टा मौका छ।
यो को लाभ स्पष्ट भण्डारण छन्। व्यावहारिक असम्भव चोरी वा व्यक्तिगत सुरक्षित बहुमूल्य वस्तुहरू वा पैसा मा राखिएको क्षति। जो, घरहरुमा नियम व्यक्तिगत बचत बैंक Safes छन् छिंडीमा मा भल्ट, प्रवेश जो सुरक्षित छ गर्न। त्यहाँ एक भाडादार र हुँदा एक समयमा तेस्रो दल पहुँच बैंक कर्मचारी, कडाई निषेध गरिएको छ।
Sberbank safekeeping लागि यो हस्तान्तरण सम्पत्ति को सुरक्षा, लागि केवल जिम्मेवार छ। निस्सन्देह, यो देश मा सबै भन्दा ठूलो बैंक को दिवाला कल्पना गर्न गाह्रो छ, तर कुनै पनि मामला मा, सेल सामग्री अनुरोध ग्राहक गर्न पठाइनेछ। को भाडादारों को मूल्य गर्न लेनदारों को दावा लागू भएन।
बचत जम्मा बक्स साझेदार बीच बन्दोबस्त लागि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। को निष्कर्षमा प्रमुख लेनदेन कानुनी संस्थाहरू वा बीच अचल सम्पत्ति संग व्यक्तिहरूलाई पैसा खरीदार र विक्रेता बीच कारोबार पूरा नभएसम्म सुरक्षित व्यक्तिगत मा हुन सक्छ। बचत बैंक मा भाडा जम्मा बक्स - सम्मान गर्न निरपेक्ष गोपनीयता निवेश हुनेछ कि एक ग्यारेन्टी। कुनै मानिस भनेर थाहा हुनेछ महत्त्वपूर्ण कागजात, बहुमूल्य धातु वा अन्य बहुमूल्य वस्तुहरू कि, भण्डारण मा राखिएको छ।
पट्टे सम्झौता एक, सुरक्षित स्वचालित गोदाम मा स्थित लागि निष्कर्षमा गरिएको छ भने, ग्राहक आफ्नो आफ्नै पिन कोड एक चुम्बकीय प्रमुख कार्ड प्राप्त गर्नेछ।
बचत बैंक आफ्नो गतिविधिहरु Notaries लागि भाडामा जम्मा बक्स प्रदान गर्दछ। आफ्नो काम, एक निश्चित समय अघि सार्वजनिक गरे भनेर हुँदैन उदाहरणका लागि हुन कागजात सम्बन्धित छ, किनभने विल्स, बैंक ग्यारेन्टी व्यावसायिक गुप्ति notaries, को।
सायद यस्तो सेवाहरूको मात्र drawback बैंक काम गर्दा एक समयमा व्यक्तिगत भाडादार भण्डारण पहुँच गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यो बेफाइदा त पहुँच असम्भव Stepping, कि सेल बैंक Sberbank ठूलो कार्यालय मात्र सेट हुन सक्छ।
पट्टा व्यक्तिगत सुरक्षित (जम्मा बक्स) को दर्ता - प्रक्रिया सरल र छिटो समय छ। यो गर्न, एक संभावित ग्राहक उपयुक्त आवेदन लेख्न र पासपोर्ट प्रस्तुत हुनुपर्छ। को निष्कर्षमा लागि भण्डारणको सम्झौता आवश्यक र प्रसारित मान को सूची।
यहाँ एक सुविधाजनक सेवा हो - सुरक्षित-निक्षेप बक्स भाडामा। लागत बचत बैंक प्रदान गर्दछ एकदम वफादार, सुरक्षित को आकार मा निर्भर गर्दछ, यो, 18 42 मा RUR / दिन देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ पट्टा को 30 दिन सुरु। पहिलो महिना मा मूल्यहरु केहि फरक र मूल्य करार को अवधि साना, महान्। भाडामा सुरक्षित जम्मा बक्स अप गर्न तीन वर्षसम्म हुन सक्छ।
क्रेडिट को पत्र - यो के हो?
तपाईंको वित्त कसरी तालिम: पेंशनरहरुलाई लागि बचत बैंक जम्मा
"Dzhi मणि" बैंक: ग्राहक समीक्षा
यस बैंकको लिक्विडिटी के हो
अर्थव्यवस्था को विश्व म्यारोमीटर
लक्षण र trichomoniasis को उपचार
इन्टरनेटमा पहुँच बिना आईपीवी 6: के गर्ने?
कसरी राम्ररी क्यालोरी आहार गणना गर्न
व्यक्तिहरूलाई SNT राम्रो तरिकाले इजाजत
कसरी yedinichku आफ्नै हातले एक वर्षको लागि के? बल बाट कागज बनेको पट्टियां को Edinichka,
Flydubai: एयरलाइन समीक्षा
बयलर - एक विकल्प बनाउन
त्यहाँ मह कुनै पनि चिनी छ: उपयोगी गुणहरू, प्रकार र प्रयोग को विशेषताहरु
म मिसिन मा neytralku समावेश गर्नुपर्छ। म ट्राफिक बत्ती मा एसीपी neytralku समावेश गर्नुपर्छ